Wasaaradda Qorshaynta oo Agaasintay shirkii Afraad ee Madasha Hormarinta Puntland Qaybta Arimaha-Bulshada – Ministry of Planning, Economic Development and International Cooperation
May 23, 2017 May 23, 2017 HComments Off on Wasaaradda Qorshaynta oo Agaasintay shirkii Afraad ee Madasha Hormarinta Puntland Qaybta Arimaha-Bulshada
Wasaaradda Qorshaynta iyo Iskaashiga Caalamiga ayaa maanta oo taariikhdu tahay 23 bisha shanaad lugu qabtay shirkii afraad ee Hay’adaha is ku shaqada ah qaybta Arimaha Bulshada (Social Sector).
Waxaa shirka furuy Wasiiru Dowlaha Wasaaaradda Qorshaynta Mudane: 𝗔𝘅𝗺𝗲𝗱 𝗜𝗯𝗿𝗮𝗮𝗵𝗶𝗺 𝗖𝗮𝘄𝗮𝗮𝗹𝗲 isagoo sharaxay Madasha Hormarinta Puntland muhiimadda ay u leedahay dad waynha reer Puntland. Wasiirka oo hadlkiisa sii wata waxa uu sheegay sababaha ka danbeeyay in la sameeyo madashan iyo sida ay uga go’an tahay Dowladda in laga shaqsiiyo.
Madaxa Hay’adda UNICEF ee Puntland Mudane: Derek Kim ayaa isna kalmadiisa qaatay isagoo ku bilaabay bogaadinta Wasaaradda Qorshaynta sida ay isugu dubariday shirka iyo kuwii kasii horeeyay ee hay’adaha is ku shaqada ah. Wuxuu sheegay in Madasha Hormarint Puntland ay tahay qaabkii lugu fulin laha Qorshaha Horumarinta Puntland ee saddexda sano.
Waxaa shirka kasoo qaybgalay hay’adaha Dawladda, Hay’adaha Qaramada Midoobay iyo Hay’adaha Caalaamiga ah.
-𝗨𝗴𝘂𝗱𝗮𝗻𝗯𝗮𝘆𝘁𝗶𝗶 𝗦𝗵𝗶𝗿𝗸𝗮 𝗪𝗮𝘅𝗮𝗮 𝗸𝗮 𝘀𝗼𝗼 𝗕𝗮𝘅𝗮𝘆:
• Waxa la is ku raacay ajendaha shirka.
• Waxa la is ku raacay in Hogaanka Arimaha Bulshadu noqonoyo Wasaaradda Waxbarashada iyo hay’adda UNICEF.
• Waxaa sidoo kale la ansixiyay Jadwalka Lixda bilood ee soo socota.
• Waxaa laga dooday, qaabka shaqada loo kale leeyaay lana ansixin doono kulanka xiga kan oo ka dhici doono Wasaaradda Waxbarashada bisha soo socota 18 keeda.